TOROHEVO: ny rejuvenation pill dia zava-misy! 80 lehilahy iray taona nitelina voalohany taorian'ny fitsapana biby: Martin Vrijland
Filed in NY SIMULATION, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 29 August 2019	• 1 Comment
David Sinclair dia mpampianatra ao amin'ny departemantan'ny fototarazo, Blavatnik Institute ary mpiara-miasa amin'ny Paul F. Glenn Center ho an'ny mekanika biolojika amin'ny Aging ao amin'ny Harvard Medical School. Ao amin'ny fanolorana etsy ambany, izy dia manazava ny fomba ifandraisan'ny fahanterana amin'ny vatan'ny olona indrindra amin'ny fatiantoka ny fampahalalana; ampitahaina amin'ny fangalarana fampahalalana amin'ny kasety vita amin'ny kasety taloha kasety taloha, satria mbola mahalala izany ny zokiolona. Toy izany koa ny fampahalalana nomerika amin'ny Internet, saingy noho ny kaonty fifehezana iray izay manamarina raha tonga na tsia ny fampahalalana, dia afaka atolotra an'io fampahalalana io ianao raha misy very data.
Ny dingan'ny fahanterana koa dia momba ny fahaverezan'ny kaody hita ao amin'ny ADN. Amin'ny alàlan'ny fanaovana polisialy an'ireny "goroka an-tsary" ireny dia azonao atao ny mamerina izany. Amin'ny alàlan'ny fampidirana 'mpanara-maso', izay ahitanao ny fampahalalana rehetra ny ADN raha toa ka very izany, dia afaka hahavita io dingana io. Voalohany dia nosedraina tamin'ny totozy ity 'mpanara-maso' ary tsy ela dia hita fa ny vidin'ny fahanterana amin'ny totozy dia azo amboarina amin'ny alàlan'ny famoizana fehezan-dalàna. Na izany aza, nivadika ihany koa ny fehiny: ny kaody DNA very no mety ho sitrana ary avy eo ireo totozy.
Ao amin'ny fampisehoana etsy ambany amin'i David Sinclair dia hahazo fanazavana amin'ny an-tsipiriany momba izany rehetra izany. Ny tena mahavariana aza dia ny nanapahan-dratsiny valo taona azy fa nanapa-kevitra ny hisedra ny pilina toy izany izy. Tsy sarotra ny vokatra sedraina mandritra ny fotoana fohy, fa toa misy ny fijanonana amin'ny fahanteran-drain'i David ary toa mahatsiaro tena ilaina kokoa izy. Izany rehetra izany dia azo antoka fa vaovao mahafinaritra ho an'ny transhumanist ary raha avy amin'ny fitsapana klinika ity fahitana ity dia azo antoka fa ho tonga eny an-tsena tsy ho ela io famoahana varotra (lafo vidy) io. Azo atao ny mamantatra fa ny pilina toy izany dia azo amidy fotsiny amin'ny manankarena sy malaza, raha toa ka satria ela velona kokoa ka noho izany dia mila vola bebe kokoa hitazomana. Ny faniriana farany an'ny transhumanista dia, mazava ho azy, ny tsy fahafatesana.
Ny fandinihana ny biolojia sy ny ADN ho toy ny angon-drakitra fampahalalana amin'ity vanim-potoana nomerika ity dia ahafahana mahafantatra tsara kokoa ny fiasan'ireo kaody rehetra. Raha vao jerena aloha dia toa mampientam-po io dingana io amin'ny fijanonana ary na dia ny fiverenan'ny fahanterana aza, raha tsy noho ny fahasarotana maro. Inona no dikan'ny famatsiam-bola fisotroan-dronono, ho an'ny mponina mitombo an'izao tontolo izao, famatsiana sakafo, hetra ambanin'ny tany, sns? Azo antoka fa hamolavolana izany ny vahaolana, fa misy ny tena miahy. Ny tena mampanahy dia ny hoe amin'ny alàlan'ny fangatahana ny fiasa rehetra ao amin'ny ADN, isika dia manakaiky ny fotoana ahafahan'ny olombelona manitsy indray. Tsy ny atidohan'i Elon Musk ihany no eny an-dalana (jereo eto), fa miaraka amin'ny fametrahana ny tambajotra 5G miaraka amin'ny (amin'ny alàlan'ny programa vaksiny) mamela ny fiovan'ny gazy hamaky ny CRISPR toy ny mamaky sy manoratra ny fiasa ao amin'ny vatana, dia manakaiky ny fotoana sy ny fisainantsika sy ny ADN isika azo vakiana ary manoratra amin'ny Internet. Noho izany dia tsy vitan'ny hoe manakaiky ny tsy fahafatesana isika, fa manakaiky ny fanovana mankany amin'ny olona android. Manontany tena foana aho hoe maninona ny rafi-pandrefesana amin'ireo finday ireo avy amin'ny Samsung, Huawei ary ny toy izany, dia mitondra ny anarana hoe 'Android'. Fantatsika ve ny tanjona iray efa ela nokasaina hatao? Fantatsika ve ny fandaharam-potoana maharitra eto?
Fandaharana amin'ny fahitalavitra an'i Jan Mulder, izay nandeha nikaroka ny fiainana mandrakizay, toa afaka manomana ny olona amin'ny fivoarana ho avy. Izahay dia mahazo saosy, toy ny teo, ary te hihady izahay. Iza no tsy te hiaina mandrakizay!?
Andraso kely! Mampanantena anao ve ny "fiainana mandrakizay" tsy hampisy dikany ny zavatra rehetra? Tsy zavatra nampanantenaintsika ve ny fivavahana? Eny, tena ho avy izany izao. Azoko an-tsaina ve fa ny fampanantenan'ny messiah avy amin'ny 'rahona' dia mifanentana tsara amin'ny sarin'ny transhumanism. Raha ny marina, raha ny marina ny atidohan'ny ati-dohan'i Elon Musk dia afaka miaina "lanitra vaovao sy tany vaovao" isika amin'ny alàlan'ny fifandraisan'ny rahona, satria ny lalao hatrizay dia ho toy ny haingam-pandeha ny fijerena ny eritreritra rehetra mivantana ao amin'ny atidohantsika dia mandrisika. Raha manoratra indray ny sela avy amin'ny rahona isika dia mahatonga ny vatana tsy mety maty, ny mesia avy amin'ny rahona dia afaka manome antsika vatana vaovao. Ny maty dia mety hitsangana aza raha ny fampahalalana ny ADN dia mbola any amin'ny toerana hafa any am-pasana iray, satria miezaka ny hitondra biby maty ho any toa ny Mammoth izahay.
Na izany aza, ny tanjona farany dia mihoatra lavitra. Ny transhumanist Hardcore dia maniry ny hahatongavantsika amin'ity tontolo biolojika ity ary hampifangaro azy io amin'ny rahona (ny 'fitrandrahana amin'ny rivotra' avy ao amin'ny Baiboly?). Homena tombony maro izany. Ohatra, tsy mila zavatra manahirana toy ny balafom-bidy lafo sy ny solika ianao manidina any Mars. Tsy mila mamerina ny rivotra ia Mars na planeta hafa koa ianao. Manorina tontolo nomerika izay tsy takatry ny saina amin'ny fiainana tena izy fotsiny. Ity fotoana ifampiraharahana eo amin'ny olona sy AI ity dia efa voalazan'ny taona ambony tao amin'ny Google, lehilahy ambony, mpamorona sy filozofa, Ray Kurzweil. Antsoiny hoe 'ny maha-tokana' azy io fotoana io ary manantena ny fampifangaroana eo amin'ny olombelona sy AI amin'ny 2045. in ity lahatsoratra ity Manazava amin'ny an-tsipiriany aho hoe inona no maha-zava-dehibe an'io fampahalalana io ary raha tena mandika 'kopian'izay efa misy' isika. Tsara ny mamaky an'io lahatsoratra io na andiany lahatsoratra manontolo handalo ao. Fa maninona no azo atao ny manome torohevitra? Eny ary, izany dia 2019. Ilay fotoana nambaran'ny laharam-piraisan-jaza (ary noho izany fivoarana rehetra izany 'tsy ho lasa tsy mety maty' ny fanoratana ny fisainantsika sy ny ADN, hatrany amin'ny maha-zava-tsaratsoratra antsika) noho izany dia 26 taona ihany no lasa hatramin'ny namakiana. Izany dia tsara indrindra amin'ny fotoana fohy ary izany dia mety hisy fiantraikany aminao sy ny zanakao.
Lees eto maninona ny andiam-baovao vaovao avy amin'ny polisy Yolanthe Cabau miaraka amin'ny lohateny DNA ihany koa dia manampy amin'ny fanomanana ny vahoaka handray ny tahirin-kevitra ADN nasionaly, mba hahafahan'ny olona manantona tsy ho ela ao amin'ny rahona ary azo soratana indray ny ADN.
Lisitry ny rohy loharano: maxvandaag.nl
Ny 'ego' dia programa AI izay mameno ny fiaramanidina ny bio-robot an'ny olombelona-avatar
Tags: be taona, tsy tia, David Sinclair, ADN, mandrakizay, Featured, Harvard, fiainana, fitsaboana, PIL, levitra, manohitra, fametahana ratra, be taona, dingan'ny fahanterana, Yolanthe Cabau
30 Aogositra 2019 ao amin'ny 08: 02
Atsipiko fotsiny ny satroko Martin Vrijland noho ity…
« Yolanthe Cabau sy ny andiam-paritry ny polisy, ny famokarana John de Mol tsara tarehy (sahala amin'ny vaovao ANP)
Adala toa izany koa ianao? »
Total visits: 16.209.593
Drafitra fampidirana famerenana ho an'ny Holandey tamin'ny volana Desambra 2019 natolotra
ZalmInBlik op Tranga 201 otrikaretina corona fanatanjahan-tena 6 herinandro alohan'ny fipoahan'ny Wuhan, dia mitovitovy toe-javatra mitovy
Zandi Eyes op Drafitra fampidirana famerenana ho an'ny Holandey tamin'ny volana Desambra 2019 natolotra
Riffian op Ny Libya dia manome fanazavana momba hoe iza avy ireo firenena any Eoropa no ho voalohany entin'i Turkey